PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-11-29 - Ingxelo – 2018 Eastern Cape SUV Challenge
Ingxelo – 2018 Eastern Cape SUV Challenge
Isolezwe lesiXhosa - 2018-11-29 - EZEMOTO NEENCWADI -
KULE veki idlulileyo besimenyiwe ukuthatha inxaxheba kwiEastern Cape SUV Challenge. Injongo yalo msitho kukucaphula kuphawulwe ubuhle beMpuma Koloni ngohlobo lokumanyana nabanini beemoto eziluhlobo lweSUV, sivuyisane nabakwaMandela nabakwaSisulu, abo babephambili ukukhokela ilizwe laseMzantsi ukufumana inkululeko.
Kaloku uTata Rholihlahla Mandela noMama Nontsikelelo Sisulu ngebegqiba iminyaka elikhulu bezelwe.
Kule Eastern Cape SUV Challenge, sidibene nabaqhubi beeSUV abaliqela, ukuba ngumngcelele osuka eBhayi ukuyokutsho eHole-in-the-Wall eCoffee Bay. Apha endleleni sigqithe kwisibhedlele iCecilia Makiwane Provincial Hospital eMdantsane kwilokishi yaseMonti, ukuphisa ngezipho, siphuhlisa, sikhuthaza iingxwelerha zabantwana abafumene iingozi okanye abagulayo.
Siye sadlula ukuya eNqadu Great Place kuGatyana ukuyokuzimasa umsitho apho bekukho iikliniki ezimiselwe ukuxilonga simahla impilo yabahlali beelali.
Umngcelele lowo weeSUV ude wayokufika eNelson Mandela Museum eQunu, apho kunikiswe ngeepasile zokutya, amabhanti emfuyo akhanyayo ukunceda iinkomo neegusha zibonakale lula futhi zisekude ebusuku xa ziye zazibhaqa zisendleleni yeemoto, nangakumbi kuN2 phakathi kweDutywa noMthatha.
Ngosuku lokuqala sisuke kwisikhululo esikhulu sosasazo kuMhlobo Wenene FM eParsons Hill eBhayi. Kumane ukumiswa kuphunyulwa eColchester naseBira emaphandleni ePort Alfred. Kude kwayokufikwa kwalalwa eMonti.
Kusuku lwesibini kuvukwe eTaiton emaphandleni eMonti kwindawo yokuphumla ekuthiwa kuseZipholele Inn. Sathi chu ukugqitha eNciba, Gcuwa, Dutywa ukuyokungena eNqadu Great Place, apho besilindelwe yiKumkani yamaXhosa. Saze sagqitha ukuyokufika eQunu, apho izithethi zabaququzeleli balo msitho nabasasazi abadumileyo boMhlobo Wenene FM baye baphosa amazwi enkuthazo kumantombazana elali, kwanikelwa ngezipho zokuzihoya ebuntombini, iipasile zokutya nezinye iintwanana zezipho koomama namaxhego elali.
Kolwesithathu nokuzalwa kukaTata Mandela noMama Sisulu.
Silivuyele eli thuba lokubona intsebenziswano karhulumente waseMpuma Koloni, Road Transport Management, uMhlobo Wenene FM neNational Heritage Foundation ukwenza iphupha elikhulu kangaka lifezeke. Umququzeleli omkhulu wale Eastern Cape SUV Challenge, uSiyavuya Mbete, udibanise abantu abaninzi ukwenza lo msitho abe yimpumelelo.
Thina sibulela abakwa-Toyota South Africa ngokusiboleka oomakoya beSUV zabo, iiToyota Fortuner ezimbini ukuze sithathe inxaxheba apha. Silandele kuTwitter [email protected] ilisolezwe, kuFacebook ku-Ilisolezwe nentatheli yethu kuInstagram [email protected]
Imigrugra yohlobo lweSUV ethathe inxaxheba kwiEastern Cape SUV Challenge phambi kokuba iyokufika eQunu (kumfanekiso wesibini nowesithathu)
IMIFANEKISO: SISANDA MBETE